अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अभिभावकत्व लिएकी १५ बर्षिया किशोरीको पेटमा कसरी आयो बच्चा? – Hamro Nepali Samachar
Home/ समाचार/अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अभिभावकत्व लिएकी १५ बर्षिया किशोरीको पेटमा कसरी आयो बच्चा?
२०७४ सालमा बालगृहमा पढ्न भनेर बसकी एक बालिका कक्षा ३ मा भर्ना भएकी थिइन् । ती बालिकाको पेटमा अहिले बच्चा आएपछि खैला बैला भएको छ । उक्त गृहमा १२ जना अभिभावकविहीन बालबालिका बसिरहेका थिए । यी अनाथ बालवालिकालाई २०७६ सालमा जनार्दन शर्माले अभिभावक बनेर बिद्यालय भर्ना गरेका थिए ।
यो घटना रुकुम पश्चिमको हो । त्यहाँको आठबीसकोट नगरपालिका– १० का वडाअध्यक्ष गंगाराम चनाराका छोरा कुश्माखर चनारा यो घटनामा मुछिएका छन् । ती किशोरीले कुश्माखरलाई घटनामा संलग्न भएको आरोप लगाएर प्रहरीमा उजुरी दिएकी छन् । वडा अध्यक्षले बनाएको ओखर फार्मका लागि प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अनुदानसमेत दिएको बताइएको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय आठबीसकोट रुकुम पश्चिमका प्रहरी निरीक्षक कपिल शाहीका अनुसार बालगृहमा बस्दै आएकी बालिकाले आइतबार प्रहरीमा उजुरी दिएकी हुन् । उजुरीमा किशोरीले कुश्माखरका बुवा गंगाराम र आमा सुनिता चनाराविरुद्ध श्रम शो ष ण गरेको पनि उल्लेख गरेकी छन् ।
प्रहरीले जाहेरी लिएसँगै कुश्माखरको खोजी भएको जनाएको छ । किशोरीको पेटमा आठ–दश हप्ताको बच्चा हुर्किरहेको प्रहरी निरीक्षक शाहीले बताए । उनको निवेदनमा आफूलाई दुइ वर्षदेखि निरन्तर त्यस्तो कार्य गरिएको र हाल पेटमा आठ–दश हप्ताको गर्भ रहेकोसमेत उल्लेख गरेकी छिन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ३ वर्ष पहिले अभिभावकत्व लिएर ती बालिकालाई सिस्ने हिमाल बालगृहमा भर्ना गरेका थिए । किशोरीले दिएको जाहेरी अनुसार २०७७ साल चैतको अन्तिममा लकडाउनको बहानामा बालगृह सन्चालिका सुनिताले आठबिसकोट १० स्थित घरमा लगी काममा लगाउने गरेकी थिइन् । वडा अध्यक्षले गरेको ओखर खेतीमा पानी हाल्ने र ब्रोइलर कुखुरापालनको काममा चारो हाल्न नियमित लगाएको उल्लेख छ ।
‘कुखुरालाई चारो हाल्न खोरमा गएको मौका छोपी वडा अध्यक्ष गंगाराम र सन्चालिका सुनिताको कान्छो छोरा कुश्माकर चनाराले पछाडिबाट आएर मुख थु नी त्यस्तो घटना गराएको उनले दिएको जाहेरीमा उल्लेख छ । प्रतिकात्मक तस्वीर